Sida loo Beddelaan FLV in VOB
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan FLV in VOB
Haddii aad soo bixi badan oo FLV videos ka websites video-qaybsiga sida YouTube, oo aad rabto si loogu badalo in ay qaab VOB u gubanaya DVD ama dadka kale, waxaa jira app dhan-in-ka mid ah inuu kaa caawiyo inaad badalo FLV in VOB ama gubi FLV si DVD si toos ah.
Taasi Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ), taas oo ay taageertaa diinta video iyo DVD gubashadii labadaba. Sidaas daraadeed waxaad u isticmaali kartaa si loogu badalo FLV in VOB, iyo sidoo kale FLV gubashada in DVD tayo audio video sare iyo. Hagaha soo socda waxaa loogu tala galay dadka isticmaala Windows. Dadka isticmaala Mac, waxaad tagi kartaa Guide users Mac '.
Tallaabo 1: Ku dar files FLV in FLV in ay Converter VOB
Si aad ku shuban files FLV in app this, aad leedahay saddex siyaabood optional:
1. Laga soo bilaabo menu ugu weyn, guji "Beddelaan" tab ka dibna dooro "Add Files" fursad u caleenta iyo dooran files FLV aad ka PC in ay soo dhoofsadaan.
2. Hit "Add Files" ikhtiyaarka in si caleenta iyo doortaan videos FLV bartilmaameed ka PC inay ku shuban.
3. Si toos ah jiidi jeedi files FLV doonayay in barnaamijka.
Talaabada 2: Dooro VOB sida qaab wax soo saarka
Hit ah "Qaabka" button dhinaca midig in ay arbushin ilaa liiska format, halkaas oo aad u baahan tahay in ay doortaan "VOB" in "qaab"> "Video" category u FLV in ay diinta ka VOB.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ku gubi FLV in DVD, marka hore, waxaad u baahan tahay in ay galaan interface ka gubanaya garaacida ah "Guba" tab in tallaabada 1. Secord, ee "Change Template" Murayaad dhinaca midig, dooro mid ka mid ah template jecel si aad DVD menu. Ugu dambeyntii, riix "Guba" ee geeska midig ugu hooseysa interface ay u DVD starn gubanaya ah.
Tallaabo 3: Ka billow diinta video
Dhinaca geeska hoose ee midigta ah FLV in ay interface ugu weyn VOB Converter ayaa, waxaa uu yahay "Beddelaan" button. Just waxa ku dhacay si loogu badalo FLV si toos ah VOB.
Ok, waxaa lagu sameeyey oo. Just ha app this samayn wax intiisa kale. Dhowr daqiiqo ka dib, waxaad ka heli kartaa file .vob ama disc DVD la content isla digital ah.
Top 10 Best gubidda DVD Bilaashka ah ee Windows
Sida loo Beddelaan FLV si Jabbuuti (Windows 10 ka mid ah)
Sida loo soo biir Mpg Files
Webcam Video Editor: Sida loo Edit Video webcam ah